Blender 2.83, yekutanga LTS vhezheni inosvika ine yakatanhamara nhau | Linux Vakapindwa muropa
Iyo software yatichataura nezvayo muchinyorwa chino haisi itsva. Izvo hazvisiwo zvitsva kuti zvinowoneka mune mazhinji masisitimu midhiya nekuti inozivikanwa kwazvo yakavhurwa sosi 3D yekugadzirisa mifananidzo, modelling, nezvimwe. Chii chinonzi nhau ndicho chinhu chekutanga chatinoona kana tichiwana iyo kusunungura chinyorwa: Blender 2.83 Iyo yekutanga LTS vhezheni munhoroondo yayo yese.
Ini ndinofunga pachave nevashoma vaverengi vasingazive zvinomiririrwa neLTS. Iwo mapfupi ku "kutsigirwa kwenguva refu," zvinoreva kuti ichatsigirwa kwenguva yakareba kupfuura zvakajairwa shanduro. Kazhinji, uye zvinotarisirwa kuti Blender ichave yakafanana, vagadziri vayo vacharamba vachiburitsa zvinyorwa zvitsva nemabasa matsva, asi Blender 2.83 ichatsigirwa kwenguva yakareba uye, pakupedzisira, ichave iri vhezheni yakakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira, dzakadai se Ubuntu 20.04 Focal Fossa LTS ikozvino yakatangwa kupfuura mwedzi wapfuura.
Blender 2.83 inosvitsa zvinopfuura 1250 zvigadziriso
Iine anopfuura 1250 bug fixes, uye zvimwe zvakaomarara zvigadzirirwa pamusoro pemakore maviri anotevera sechikamu chenguva refu yekutsigira chirongwa, Blender 2.83 LTS inopa iko kuita uye kugadzikana kunodiwa kumabasa makuru. Zvitsva zvinosanganisira kukosheswa kwechokwadi, OpenVDB kupinza, OptiX optical windows denoising, uye ine simba nyowani nyowani-inogonesa Cloth Brush
Pakati pekuchinja kwakakurumbira, isu tine:
Pakutanga rutsigiro rweVR kuburikidza neOverXR.
Kugona kupinza OpenVDB, uyeIyo fomati fomati yakagadzirwa neRotoWorks Mifananidzo yevolumetric application uye zvakare inoshandiswa naMaxwell Render, RenderMan, Houdini, Cinema4D, uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa. Inoshanda neyatsva vhoriyamu chinhu rutsigiro.
OptiX viewno denoising, uye nyowani yefizikisi-yakavakirwa machira bhurasho.
Blender's Eevee ichipa injini mu v2.83 inotsigira kupa vanopfuura, zvemhando yepamusoro zvakajairika, kuve pachena kwevhudzi, uye zvimwe zvinowedzera.
Kwese kugadziridzwa kwakaitwa, kusanganisira kunatsiridzwa kuita.
Blender 2.83 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu (Windows, macOS, Linux uye kunyangwe vhezheni yeSteam), kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vanogona zvakare kurodha yako snap package uye vhezheni yayo mu Flatpak, kunyange Flathub's isati yagadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Blender 2.83, yekutanga LTS vhezheni yesoftware inouya nenhau dzakatanhamara